AmaNadi nesiqalo esisha – Msunduzi News
Amakhaza abeshubisa umkantsha ngomhla ziyisi-9 kuNcwaba awakudambisanga ukujabula kwamalungu esizwe samaNadi ngaphansi koMsunduzi. Ngalolu suku lesi sizwe besiqala ikhasi elisha njengoba ngokwesiko nangomthetho bekubekwa loyo ozoba yibamba Bukhosi. Obemiswa kuleyo ndawo bekunguNdlunkulu (uZamathuli) weNkosi uSondelani Zondi owedlulela koyisemkhulu eminyakeni emihlanu eyedlule. Ngokwesiko lona ngumsebenzi omqoka ngoba usuke usukhomba khona ukuthi emuva kokuwa kwesihlangu seSILO (ukudlula kweNkosi) umndeni usukwazile ukubona ilahle emlotheni nelingabuye liphembe umlilo woBukhosi.
Injabulo ibibonakala ebusweni kwabancane nabadala balesi sizwe. Abesifazane bebelilizela kanti izinsizwa zona zisho phezulu ngeziqubulo namahubo esizwe, kukuhle kudelile. Kuthe lapho sekufika kuvuthondaba, lapho uNdlunkulu eholwa ngamalungu omndeni amadala eseya esigcawini nayilapho esezokhuluma nesizwe kwavunguza umoya wethemba lezikhathi ezizayo. Phakathi kwamalungu omndeni ayekhona kwakuyiNkosi uNsikayezwe Zondi, iNkosi uMthuli enguyise kaNdlunkulu kanye neMeya uNjilo.
Kuwo lo mcimbi kwenzeke okuyinqabakutholwa ngoba uNdlunkulu uba yibamba Bukhosi nje naye uzalwa eBukhosini baMathuli. Okungejwayelekile wukuthi kulo mcimbi ubemi noyise, iNkosi uMthuli obuye abenguSihlalo weNdlu yaMakhosi esifundeni.
Ngesikhathi ehlela enkundleni uNdlunkulu ubebonakala ukuthi uselamukele ijoka athweswe lona ngumlando nesizwe nokuyinto ayiqinsekise engxoxweni ekhethekile abe nayo naleli phephandaba.
“Angikaze ngiphuphe ngisho ngilele ukuba kule ndawo engikuyo namuhla. Kepha umndeni ebuhlakanini bawo ubone kulungile ukuba ngibe khona. Okumqoka wukuthi sigijime ngamandla ukuqinisekisa intuthuko endaweni yakithi sisebenzisana noMkhandlu. Kuningi okumele sikukhathule,” kusho uNdlunkulu.
Kule ngxoxo uNdlunkulu uveze okuhle kokuthi uma kule ndawo akuyo nje akukhona ukuthi kuqalwa phansi ngoba endaweni zikhona izinhlaka ezikhona zokusebenza kanjalo nezingxoxo nemicabango emihle engathuthukisa indawo.
Uthe kuhle ukuba yonke imibono ilalelwe ihlelwe kahle ukuze ingagcini ingeyomuntu ngayedwa kepha ibe ngeyesizwe, ukuze ithuthukise isizwe. Ngakolwakhe uhlangothi uveze ukuthi lukhona uhlaka asebenza ngalo olubizwa ngeThemba Labafelokazi. Ngokusho kukaNdlunkulu lolu hlaka lumele ukulekelela abathintekayo ngezindaba ezithinta ukungena kwabo endimeni yamabhizinisi kanjalo nezindaba zentuthuko.
Iphawula ngobumqoka balesi sigaba somsebenzi iMeya uNjilo ithe nembala umsebenzi lo usho isiqalo esisha nathe kuhle kukhathulwe ngamadla kwazise kule minyaka emihlanu izinto zike zangahamba ngesivinini esifanele.
UNjilo ukuthakasele nokuthi okwenzekile kufakazela igama elabe lishiwo ngabadala endulo lentandane enhle engumakhothwa ngunina.
“Ngithokoze kakhulu ngalo msebenzi. Namuhla isizwe sinomholi kuphinde kube kuhle kakhulu ukuthi lo mholi ungowesifazane. Njengoba isiZulu sisho ukuthi intandane enhle ngumakhothwa ngunina, namuhla amaNadi anomama emuva kokuhamba kwenhloko yomndeni,” kusho uNjilo.
IMeya ibe seyeluleka ukuba uMkhandlu Wesizwe kuyomele uzihlele kahle ukuze ube sethubeni elihle lokukwazi ukusebenzisana noMkhandlu kanye neminyango ethintekayo ukuze kusondele intuthuko.
Kanti enkulumweni yayo egameni laMakhosi akhele isifunda, iNkosi uMthuli usibongele isizwe ngokufika kulesi sigaba esikuso wabe esesigqugquzela ukuthi sibambane ekuletheni ubunye nentuthuko esho khona ukuthi ngokwenza njalo siyobe sithumela umlayezo wokuthi asisona isizwe sezehluleki.
Obekhulumela umndeni uMnu uNhlanhla Zondi uphawule ngohambo olube mazombezombe nathe konke sekwedlule ngoba nakhu indlela isiyakhanya.
Previous post: Olwemfucuza kalwehli kahle kuMasipala uMsunduzi
Next post: Isifiso sabafundi sokubuyisela okuhle eMsunduzi